Marvel's Daredevil မှ Vincent D'Onofrio နှင့် Twitter Q & A - Netflix မူရင်း
Marvel ရဲ့ Daredevil ၏ Vincent D'Onofrio နှင့်အတူတွစ်တာ Q & A မှအကောင်းဆုံးအဖြေများ
David Oyelowo ၏နိုက်တင်ဂေးလ်သည် HBO တွင်မေလ ၂၉ ရက်၌ပြသမည်ဖြစ်သည် HBO သည် Game5of Thrones ၏ရာသီ ၅ မှခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ထိုးနှက်ချက်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် Netflix မူရင်း က Bryce Olin လွန်ခဲ့သော6နှစ်က @bryceolin ကိုလိုက်နာပါ
အင်္ဂါနေ့တွင် Vincent D'Onofrio၊ Netflix ၏မူလစီးရီး၏ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သည် အံ့’s ခြင်းရဲ့ Daredevil , Daredevil twitter အကောင့်ကိုလွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည် @Daredevil ပရိသတ်များထံမှလာမည့်စီးရီးများနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်။ စီးရီးများတွင် D'Onofrio ကိုလည်း Wilson Fisk အဖြစ်လူသိများ Kingpin, လူကြမ်းကစား (သို့မဟုတ်သူပါသလား) Kingpin ။
ပရိသတ်များသည်ဘုရားတရားမဲ့သည့်တွစ်တာများပေးပို့ခဲ့သည် #AskFisk နှင့်ထို tweets ၏လက်တဆုပ်စာသာဖြေကြားခဲ့ကြသည်။ ထိုအဖြေအချို့သည်အခြားသူများထက် ပို၍ ကောင်းသည်။
ကူညီရန် Daredevil ပရိသတ်များ၊ ငါဒီမှာအကောင်းဆုံးအဖြေအချို့ကိုငါပြုစုနိုင်ပြီ၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင် twitter ပေါ်တွင် sort လုပ်စရာမလိုပါ!
'' @ Huntress62 The Kingpin နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါသလား။ #AskFisk @Marvel @vincentdonofrio 'ငါကသူ့ကိုမှတဆင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခဲ့သည် #ပင့်ကူလူသား ရုပ်ပြ။
- Daredevil (@Daredevil) မတ်လ 18, 2015
'' @Court_of_Nerds @Daredevil Vanessa ဟာအသွင်အပြင်ကိုလုပ်နေတာလား။ #AskFisk ' အေးဟုတ်တယ်။ သူမသည် Fisk မူရင်းဇာတ်လမ်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့အရာအားလုံးရှိပါတယ်။
'' @WALIDMUSIK Daredevil ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ #AskFisk @Daredevil #Daredevil 'ငါကစူပါအေးဆေးကုမ္ပဏီမှာရှိတယ်။ အလွန်ကြီးစွာသောခံစားမှု။
'' @ Nami_1104 @vincentdonofrio သင်၏တန့်နှစ်ဆကိုသင်ဘယ်လိုဖော်ပြသနည်း (ငါသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးသူကသင်နှင့်တူသည်!)? #AskFisk 'အလွန်အမင်းချောမော။
'' @NachooIAm @vincentdonofrio #AskFisk #Daredevil Wilson Fisk ကိုစကားလုံးသုံးလုံးဖြင့်အတိုချုပ်ပြောပြနိုင်မလား။ ' ကလေးနှင့်နဂါး။
'' @Collgroot @vincentdonofrio Wilson က Fisk Daredevil အတွက်အများဆုံးနှစ်သက်မြတ်နိုးသောကဘာလဲ? #AskFisk သူကသူ့ဇွဲနဲ့သေးငယ်တဲ့အရွယ်ကိုကြည်နူးမိသည်။ ဟေ့!
'' @Thekidfliessolo မင်းရဲ့တံဆိပ်ခေါင်းကို Kingpin ပေါ်မှာထားဖို့သင်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ ၁ ။ #AskFisk '' သူ့စိတ်ခံစားမှုဘဝကိုမှန်ကန်စေခြင်းငှါ။
'' @DianeTigger #askfisk ဘာလဲ #Daredevil မင်း Fisk အခန်းကဏ္wantကိုလိုချင်လားတဲ့။ ဘယ်လိုလဲ @stevendeknight အစစ်အမှန်ကလူအဖြစ်အက္ခရာချဉ်းကပ်။
နှင့်အညီ, အဲဒီမှာသင်ကရှိသည်! ငါနောက်ဆုံးအဘို့အကောင်းဆုံးကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ထင်ပါတယ်။
သဘာဝလွန်ရာသီ 12 Netflix အပေါ်ရောက်လာပေရသောအခါ
စတီဗင် DeKnight သည်ဤစီးရီးများနှင့်အတူအံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်ရန်သွားသည်။ ဒီဇာတ်လမ်းကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းအဖြစ်ယူဖို့ DeKnight နဲ့သူ့အဖွဲ့ကိုငါအပြည့်အဝယုံကြည်မှုရှိတယ်။ ငါဝေးယခုမြင်ကြပြီအဘယျသို့ကနေ Daredevil ပုံပြင်သည်အခြားအခြားစူပါဟီးရိုးဇာတ်လမ်းများထက် ပို၍ လက်တွေ့ကျလိမ့်မည်။ ပန်ကာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။ တခါတရံမှာအင်အားကြီးလာရင်ပိုနည်းတယ်၊ Daredevil ကြောင်းစိတ်ကူးရောင်ပြန်ဟပ်သင့်ပါတယ်။
၏ 13 ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ပထမရာသီ အံ့’s ခြင်းရဲ့ Daredevil flပြီလ 10 ရက်နေ့တွင် 12:01 a.m. မှာ Netflix ကအပေါ် Premieres ။
နောက်တစ်ခု:Netflix မှ 50 အကောင်းဆုံးတီဗီစီးရီး
ဘယ်အချိန်မှာဝက်အူချောင်းပါတီ netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
elle marco နှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်ပါဘူး
Netflix အပေါ်ရသောအခါအလိုတော်ဥယျာဉ်၏ရာသီ7နှင့်ဖမ်းယူရေးအ
netflix ဗဟို update လုပ်ပါလိမ့်မယ်